काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन ४ सय ९५ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँका कति ? Canada Nepal
काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन ४ सय ९५ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँका कति ?
काठमाडौं - बुधवार काठमाडौं उपत्यकामा थप ४ सय ९५ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा थप कोरोना संक्रमित हुनेमा काठमाडौंका ३ सय ६० जना, ललितपुरका ७२ जना र भक्तपुरका ६३ जना रहेका छन् ।
यस्तै मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा १७ सय ६० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ७ लाख ८० हजार ८ सय २४ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ८७ हजार ८ सय ४१ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा १२ सय २० जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ७ लाख ४३ हजार ५ सय २६ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निको हुने दर ९५।२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित २६ हजार ३ सय ७ जना रहेका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप ७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १० हजार ९ सय ९१ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भाद्र ३०, २०७८ बुधवार १८:०८:१८ बजे : प्रकाशित